U-El Toro Ferdinando ubuyela kwimidlalo yeqonga: Ngaba uyalazi ibali? | Uncwadi lwangoku
U-El Toro Ferdinando ubuyela kwimidlalo yeqonga: Ngaba uyalazi ibali?
Iminyaka engama-78 emva kwe Inkunzi yenkomo uFerdinando anganika okuninzi ukuba athethe, abalinganiswa abanjengoFranco noHitler "babemazi" kakuhle, ubuyela kumdlalo bhanyabhanya kodwa ngeli xesha enegama lika "Ferdinand." Awazi ukuba ibingubani le nkunzi yenkomo kwaye kutheni le nto ivelise impikiswano engaka phantse kumashumi asibhozo eminyaka eyadlulayo? Hlala ulifunde lonke inqaku elikuyo sikuxelela ibali lalo nazo zonke iintlobo zeenkcukacha.
"Inkunzi yenkomo uFerdinando" Libali labantwana likabani ophambili nguFerdinando, "owayehlala" eSpain enelanga iminyaka emininzi eyadlulayo. Wayengafani nazo zonke ii-steers, ezazidlalela entloko imini yonke, ngokuchaseneyo. UFerdinando wayenekona yakhe ayithandayo kude namadlelo. Uchithe iintsuku zakhe ehleli phantsi komthunzi womthi kwaye Kunuka iintyatyambo zentsimi, Isimo esasimkhathaza kakhulu umama wakhe, inkomo enkulu yobisi. Njengabo bonke oomama, lo mntu wayecinga ukuba unyana wakhe uza kusala engenakunceda kwaye yedwa kunye nokuziphatha.
Ngesi sizathu lo mama wabuza uFerdinando ukuba akangethandi ukudlala nezinye ii-steers. Impendulo yayihlala ifana nakwinxalenye yethole: Hayi! Njengokuba umama wakhe wayeqonda kakhulu, wamvumela ukuba ahlale phantsi komthi wakhe awuthandayo kuba wayesazi ukuba ulapho Unyana wakhe ebonwabile.
Iminyaka idlulile kwaye uFerdinando waba yinkomo enkulu, womelele kakhulu kwaye womelele. Ezinye ii-steers nazo zakhula kwaye ngelixa zonke zaziphupha zikhethelwa ukulwa iinkomo ePlaza de Madrid, uFerdinando wayesathanda ukunuka iintyatyambo phantsi komthi awuthandayo.
Ngenye imva kwemini kwafika amadoda amahlanu kwaye ayekhangela eyona nkunzi ilungileyo yokulwa inkunzi elandelayo eMadrid. Ngesi sizathu iinkunzi zeenkomo zaqala ukubaleka zisiya kwenye indawo zizinika iintloko ukubonisa ukuba zezona zibalaseleyo kwaye ke ngoko zathathwa. UFerdinando wayesazi ukuba ngekhe bamkhethe kwaye akazange akhathazeke, wayehlala phantsi komthi awuthandayo kodwa ngethamsanqa elibi kangangokuba wakwenza kwinyosi enkulu eyagqobhoza uFerdinando ohluphekileyo. Oku kwamenza wanyathela, etshabalalisa yonke into eyayisendleleni yakhe kwaye emnika umfanekiso ogqibeleleyo wenkunzi yenkomo ekhaliphileyo kwaye elungele inkunzi yenkomo ePlaza de Madrid. UFerdinando wafutha kwaye waphunga ngokungathi uyaphambana kwaye xa la madoda mahlanu ambonayo, akhwaza ngovuyo. Bonke bavumile ukuba uFerdinando wayeyinkunzi yenkomo ababeyifuna, ke bamsa esikwereni ngemoto.
Ngomhla wokulwa kwenkunzi yenkomo, iqela lidlale kwaye iiflegi ziwangawangisile, ipaseo yaqala ngendlela engaqhelekanga, iqela elingena kuqala, emva koko ipikadores, emva koko umlo weenkunzi, onekratshi kunaye nabani na, obulisa uluntu wabanika ikepusi yakhe . Ekugqibeleni, iingcango zavulwa ukuze kuphume inkunzi yenkomo, enguFerdinando, ababemthiye ngegama "El Fiero". Lonke iqela lemigulukudu kunye nomlo weenkomo babesoyika, nangona kunjalo, uFerdinando akazange aqaphele enye into ngaphandle kwesipha esihle seentyatyambo esasiphoswe ngumntu esidlangalaleni. Ufike kwiintyatyambo, wahlala ngokuzolileyo kwaye waqala ukuzinukisa emkhumbuza ngamaxesha amnandi awawachitha ukusukela emncinci emthunzini kowona mthi awuthandayo. Xa beyiqondileyo loo nto, le genge yacaphuka, kunye nepikadors kunye noluntu. Wonke umntu wayenomsindo kakhulu. Umbetheli wenkunzi yenkomo waqala ukwenza ubuso oboyikekayo kwinkunzi yenkomo ehlwempuzekileyo uFerdinando, kodwa akazange oyike. Umlobi wenkunzi walikroboza ikrele lakhe, walikhaba, watsala iinwele zakhe wamcenga uFerdinando ukuba amhlasele apho wakrazula iimpahla zakhe kwaye ngokumangalisayo wayenopopu obhalwe esifubeni sakhe engenanto ngaphandle komlomo kaFerdinando. ebenuka ngokungathi yenye intyatyambo yokwenene.
Bejamelene nokungenakwenzeka kwaleya nkunzi ukuqala nokuhlawulisa ikapa, bagqibe kwelokuba bambuyisele ebaleni kwaye kwinto esiyaziyo, uyaqhubeka nokuhlala ngokuzolileyo phantsi komthi awuthandayo, enuka iintyatyambo kwaye onwabile kakhulu.
Isiphithiphithi sezopolitiko ngelo xesha
Eli bali lenkunzi yenkomo ekhethekileyo lahlasela isiqu sakhe Franco, kodwa hayi ifayibha ethe-ethe kodwa ngokuchaseneyo ngokupheleleyo. Kwakamsinya nje ukuba iphele iMfazwe yamakhaya, uFranco wayalela eli bali. Kuye, kwakungacingi ukuba inkunzi yenkomo ayifuni ukulwa. U-El Toro Ferdinando wayevakala ngathi "khohlo" sele sele "IRiphabhlikhi" Ngelixa umhlobo wakho kunye nogxa wakho Hitler kwenzeka into efanayo nakuye. Wayiphikisa kwivenkile ethengisa iincwadi yaseJamani waze watshisa neekopi zayo, eyibiza ngokuba "yintetho esasazekayo yedemokhrasi."
Kwaye njengoko sonke sisazi ukuba kwenzeka ntoni xa into ingavunyelwe ukugqitha, kukuba ipropaganda ebhekisa kwimbali yayinkulu ngakumbi. Yaguqulelwa ngaphezulu kwe Iilwimi ezingama-60 kwaye kuphela eUnited States ngaphezulu iikopi ezizigidi ezine.
Nje ukuba uHitler "asweleke" eJamani, inkcaso, yashicilela ezinye Iikopi ezingama-30.000 zika "Ferdinando el Toro" kwaye bazabela abantwana baseJamani simahla ngexesha lokugcina uxolo. Ukuza kuthi ga ngoku Gandhi Ndixelela eli bali ukusasaza umyalezo omnandi kangaka.
Kwaye, Disney yamsa kwiscreen esikhulu kwaye yamenza waphumelela I-Oscar yeFilimu eNcinci eFutshane yoopopayi ngonyaka 1939.
Inguqulelo entsha yale thenda kunye nenkomo elula iya kukhutshwa kungekudala. Ngaba uza kuyibona le movie yoopopayi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » U-El Toro Ferdinando ubuyela kwimidlalo yeqonga: Ngaba uyalazi ibali?
Iincwadi ezisi-8 zobusika nobusika, elona xesha lifanelekileyo lokufunda